Goleyaasha Deegaanka Somaliland oo kiddo xileedkoodii dhamaaday | Berberanews.com
Home WARARKA Goleyaasha Deegaanka Somaliland oo kiddo xileedkoodii dhamaaday
Goleyaasha Deegaanka Somaliland oo kiddo xileedkoodii dhamaaday
Golayaasha degaanka ayaa taariikh ahaan soo maray laba marxaladood oo kala ah, in markii ugu horreysay ay maamuli jireen magaalooyinka Somaliland, oo maayirro iyo maayirro ku xigeen ay soo magacawdo dawladda dhexe.
Marxaladda labaad ayaa iyana ah, in sanadkii 2001 ay guud ahaan shacabka Somaliland u codeeyeen dastuur oo cusub oo dhigaya nidaam cusub.
Dastuurkaasi ayaa waxuu dhigayey in degmo walbo gaar isu maamusho, oo samaysato gole degeaan oo iyada u gaar ah, isla mar ahaantaana shacabku soo doorantaan iyaguna ay iska sii dhex doortaan maayarro iyo ku xigeennadooda.
Xildhibaanada golayaasha deegaanka ee Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayay ahayd in maalinkii shalay lasoo doorto, maadaama xilligii loo asteeyey u ahaa 29 bishan Maarso.
Xildhibaanada imika jooga ayaa la soo doortay sannadkii 2012-ka, waxaana shantii sanno ee la doortay ay ku ekayd sannadkii 2017kii.
Muddadaasi wixii ka dambeeyay ayayna suurto gelin in doorasho la qabto, waxaana laba sanno oo dheeraada loogu daray inay xilka sii hayaan taasi oo iyana haatan dhamamaad ah.
Ilaa imika ma jirto xog rasmiya oo xukuumadda kasoo baxday oo ah waxa laga yeelayo maaddaama doorashadii lagu keeni lahaana kuwo kale ay dib u dhacday.
Golayaasha deegaanka ayaa inta badan dadku ku dhalliilaan waxqabad yaraan dhanka dhismaha jidadka iyo nadaafadda magaalooyink ah iyo guud ahaan howlihii loo igmaday.
Garyaqaan Guuleed Dafac oo ka tirsan mac-hadka cilmibaarista ee CPA ee Somaliland oo BBC-da uga waramay waxa uu dastuurku dhigayo marka sidaan oo kale muddo xileedku uga dhammaado golayaasha oo aan doorashaduna dhaweyn ayaa sheegay in “Marxaladda haatan Somaliland ku jirto ee ah, in golihii degaanka muddo xileedkii uu ka dhammaaday aysan wax horey u soo dhacay, Balse haddii aanu jirin muddo xilliyeed cayiman maadaama aan cidna ugu darin, ay tahay in si ku meel gaadh ah loogu sii wareejiyo xogyaha golaha degaanka, illaa iyo inta doorasha laga gaadhayo” .
Previous articleGeel-dhaqatada casriga ah oo ku soo badanaya Somaliland
Next articleIsbedellada ka dhashay aragtida ilhaan Cumar iyo nuclearka Itoobiya